သူကျေးဇူးဆပ်ပုံကလဲ တစ်မျိူး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » သူကျေးဇူးဆပ်ပုံကလဲ တစ်မျိူး
Posted by Shwemannmay on Jun 22, 2010 in News | 8 comments
ဂျပန်နိုင်ငံမှ အဖော်အချွတ် စတား တစ်ဦးက တရုတ်နှင့် ဂျပန် စစ်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့စဉ်က ဂျပန်တို့ ကျူးလွန်ခဲ့သည့် ပြစ်မှုများ အတွက် တရုတ်တို့အပေါ် သူမ တတ်နိုင်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် ပြန်လည် ပေးဆပ်ရန် ကမ်းလှမ်းလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
တိုင်းပြည်၏ အမှားများ အတွက် သူမနှင့် အတူ တရုတ် ကျောင်းသားများကို လိင် ဆက်ဆံခွင့် ပေးသွားရန် စိတ်ကူးထားကြောင်း ရွန်ချီအန်ရီက ပြောကြားခဲ့သည်။ (၁၉၃၇) ခုနှစ်အတွင်းက ဂျပန် စစ်သားများ တရုတ်တို့အပေါ် ကြမ်းတမ်း ရက်စက်စွာ ပြုကျင့် ခဲ့မှုများကို သိရှိလာရပြီးနောက် သူမ ကိုယ်သူမ ဂျပန်နိုင်ငံသား တစ်ဦး အနေနှင့် ရှက်လာ မိသည်ဟုဆိုသည်။ တိုကျိုမြို့တွင် နေထိုင်သည့် ဆွဲဆောင်မှု ရှိလှသည့် အသက်(၂၄) နှစ်အရွယ် အန်ရီက ဂျပန် နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ ပညာသင်ကြားနေသည့် တရုတ် ကျောင်းသားများအား သူမ တတ်နိုင်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် ပေးဆပ် သွားမည်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။ သူမ သည် ဂျပန်၏ ကျူးကျော်မှုများအား သင်ကြားခွင့် ရခဲ့ပြီးနောက် သမိုင်းတွင် ဆိုးဝါး ယုတ်မာခဲ့မှုများ အတွက် တရုတ်တို့အပေါ် လေးလေးစားစား ပြန်လည် ပေးဆပ် သင့်သည်ဟု ယူဆကာ ယခုလို ကမ်းလှမ်း ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။
တရုတ် လူငယ်များ၏ ဂျပန်တို့အပေါ် သမိုင်းနှင့်ချီသော နာကျင်မှု အတွက် စာနာ နားလည်နိုင်ကြောင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ရှိနေသည့် တရုတ် ကျောင်းသားများအား တောင်းပန်သည့် အနေနှင့် သူမ ခန္ဓာကိုယ်ကို စိတ်တိုင်းကျ အသုံးချ ခွင့်ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အန်ရီက အတည်ပြု ပြောဆို သွားခဲ့သည်။
credit to people voice media
တို့ ဗမာ တွေကိုရောဟင် မပါဘူးလား?
အဲ့… တစ်မျိုးပါလား? စတန့်ထွင်တာလား? နိုင်ငံအတွက်ပေးဆပ်မယ်ဆိုလည်း ဒီလောက်ထိတော့ မလိုပါဘူး… :D
အဲလိုသာလိုက်အကြွေးဆပ်နေရင်တော့..ဂျပန်တွေက ကမ္ဘာပတ်ပြီး သောင်းကျန်းခဲ့ကြတာပဲ။ ဘယ့်နှယ်ကြောင့် သူက တရုတ်တွေပဲရွေးပြီး ကျေးဇူးဆပ်ချင်နေရတာတုန်း…
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လဲ ဂျပန် ငပု တွေလာ သောင်းကျန်းသွား တာ ဒီ ဂျပန် ငပုမ မသိဘူးလား မသိဘူး ညံ့လိုက်တာ မြန်မာနိုင်ငံကိုလဲ လာပြီး ကျေးဇူး ဆပ်ရမယ်လို့ Shwemannmay ရေ ပြောပေးပါအုံး… ပြောပြီပြီးဆို ပြန်ပြီး သတင်းတင်ပေး မယ်ဆို အတိုင်းထက်အလွန် Shwemannmay ကိုကျေးဇူးတင်မှာပါ … :D
မြန်မာမှာလဲ သူတို့ လာသောင်းကျန်းတာပဲကို
ကျေးဇူးဆပ်တယ်ဆိုတာဗန်းပြတာပါ တကယ်တမ်းသူ့ဝါသနာကိုက ……..။
ဒို့ ဂျီးတော် ကြီးရွာနား ကိုလည်း နိပွန်မာစတာတွေ ဖြတ်သွားတယ်ဆိုဘဲ